देखेको १० दिनमा नै पूरा हुन्छन् यस्ता सपनाहरु, हेर्नुहोस् के भन्छ शास्त्रले ! – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/देखेको १० दिनमा नै पूरा हुन्छन् यस्ता सपनाहरु, हेर्नुहोस् के भन्छ शास्त्रले !
काठमाडौँ । सुतेपछि सपना देख्नु स्वभावीक हो । देखिएका केही सपनाहरु शुभ हुन्छन भने केही सपनाहरु लाई शास्त्रले नै अशुभ मानेको छ । मत्स्य पुराणको २४२ औँ अध्यायमा सत्ययुगमा भगवान विष्णुले मत्स्य अवतार लिएका थिए त्यतिबेला महाराज मनुले शुभ सपनाको फल बारे बताउन आग्रह गरेका थिए । विष्णुले सूर्योदयमा देखेका केही सपनाहरु शुभ रहने बताएका थिए ।
एकै रातमा शुभ या अशुभ सपना देख्नु : यदि कुनै व्यक्तिले एक्कै रातमा शुभ वा अशुभ दुवै सपना देख्छ त्यसमा शुभ सपना देख्नु चाही पुरा हुने मान्यता रहेको छ । सोही सपनाको आधार मानेर मानिसहरुले विभन्न शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सपनामा यी चिज देख्नुलाई हितकारी मानिन्छ : सपनामा पर्वत, हात्ती, घोडा, गोरु आदिमा सवार गरेर हिडेको देख्नुलाई शुभ मानिन्छ ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
सपनामा लडाई झगडा देख्नु : सपनामा लडाई गरेको युद्ध गरेको देख्नुलाई पनि शुभ मानिन्छ । साथै वादविवादमा विजय हासिँल गरेको देखेमा, काच्चो मासु खाएको देखेमा, रगत वा रगते नुहाएको देखेमा राम्रो मानिन्छ । जुन सपना देखेको १० दिनमा नै फल प्राप्त हुन्छ । दुध पिएको देख्नु सपनामा दुध पिएको देख्नुलाई शुभ मानिन्छ ।